Umakhi wensimbi eqondile wensimbi, Umhlinzeki, iFektri - izinciphisi, izinciphisi zesikelemu, amabhokisi ama-worm, amabhokisi wamagiya aseplanethi, izinciphisi zejubane, okuguquguqukayo, amagiya asizayo, amagiya wentsimbi, amasondo wezolimo, amagiya kagandaganda, amagiya weloli, ibhokisi lesigungu lesibungu
I-Precision Roller Chain, Elements kanye nezixhumanisi ezixhumayo
Uchungechunge lwensimbi olunemba kahle luvame ukuba yindlela ephumelela ngempela futhi ehambisanayo yokudlulisa amandla kagesi, okuthi, phakathi nomkhakha wezicelo zezimboni, acishe zonke ezinye izinhlobo ze chain esetshenziswe phambilini. Umdwebo ongaphansi kokukhonjiswa kwengxenye yezingxenye ezivela kusixhumanisi esingaphandle nakwisixhumanisi sangaphakathi sewebhusayithi yochungechunge olulula kakhulu lwe-roller. Njengoba kubonisiwe, iketanga lensimbi elinemba liqukethe uchungechunge lwamabombo wejenali aphethwe ngobuhlobo ngqo komunye nomunye ngokusebenzisa izingcwecwe zesixhumanisi sewebhusayithi. Ukuthwala ngakunye kuqukethe iphini lokuthwala nesihlahla lapho i-roller chain isukela khona. Iphini kanye nesihlahla kunamacala aqinisiwe ukuvumela ukucaciswa ngaphansi kwengcindezi ephakeme, nokulwisana nomthwalo ophethe izingcindezi nokwenza isenzo sokudlulisa okunikezwa ngama-roller chain. Onke amaketanga ahlukaniswa ngokuvumelana ne-pitch (ibanga eliphathelene nezikhungo zezikhonkwane eziseduze), ububanzi be-roller nobubanzi maqondana namapuleti angaphakathi. Ngokubambisana, lobu bukhulu baziwa ngokuthi ubukhulu bokuhamba, njengoba benquma ifomu nobubanzi ngamazinyo we-sprocket.
Izixhumanisi ezijwayelekile zasemuva
Izingxenye zamaketanga nezixhumanisi ezixhumanisayo zikhonjisiwe kuphela ezinhlotsheni ezifinyelelekayo. Sicela ubheke kumkhiqizo ofanele noma ikhasi lesevisi yezingxenye zakho ezifanele amaketanga omuntu.
Baqeda imihlangano yokusetshenziswa ngabo bonke osayizi nezinhlobonhlobo zamaketanga. Iyunithi iqukethe amapuleti amabili angaphakathi acindezelwe aqonde emahlathini athwala amasondo. (Izixhumanisi zangaphakathi zokusetshenziswa ngamaketanga amahlathi azinawo ama-roller).